Erdogan oo wacad u maray ciidamada Kurdiyiinta wixii ka dambeeya xabbad joojinta Suuriya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Erdogan oo wacad u maray ciidamada Kurdiyiinta wixii ka dambeeya xabbad joojinta...
Erdogan oo wacad u maray ciidamada Kurdiyiinta wixii ka dambeeya xabbad joojinta Suuriya
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay Jimcihii in Turkey ay dib u bilawdo howlaheedii milatari ee ka dhanka ahaa xoogaga Kurdiyiinta ee Talaadada hadii aysan ka laaban “meel nabdoon”, halka Kurdiyiinta ay ku eedeeyeen Erdogan inuu jabiyay xabbad joojinta kadib markii uu qarxiyay jagooyinka dagaalyahanada iyo isu imaatinka shacabka.
Erdogan ayaa wariyeyaasha ugu sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay Istanbul: “Haddii ballamihii la fuliyay illaa fiidnimadii Talaadada, dhibaatada aagga nabdoon waa la xallin doonaa. Haddii lagu guuldareysto, howshu waxay bilaabaneysaa … daqiiqadda ay dhammaaneyso 120 saacadood.”
Erdogan wuxuu sheegay inuu ku ogeysiiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wadahadal taleefan oo ku saabsan howlgalka 6-dii Oktoobar. Wuxuu intaas ku daray: “Waxa la qaban doono marka waqtigu sax yahay,” isagoo faallo ka bixinaya warqad ka timid Trump, isagoo u sheegay Erdogan inuusan noqonin “doqon” iyo “qallafsan”.
Dhanka kale, SDF waxay ku eedeeysay Turkiga qaraxii meelaha shacabka ka dhacay inay jabisay xabbad-joojin shanta maalmood ah oo ka dhacday waqooyiga bari ee Syria.
Afayeenka SDF Mustafa Bali ayaa sheegay jimcihii in kasta oo la isku afgartay in dagaalka la joojiyo, weerarada cirka ee Turkiga iyo madaafiicda ayaa sii wada bartilmaameedka goobaha mucaaradka iyo isu imaatinka shacabka.
Bali wuxuu intaas ku daray in ciidamada Turkiga ay duqeeyeen magaalada Ras al-Cayn. Duqeynta xadka ayaa la maqlay subaxnimadii Jimcaha, in kasta oo xabbad joojin ay ku heshiiyeen Ankara iyo Washington.
Kulankan ayaa yimid maalin kadib markii wefti Mareykan ah oo uu hogaaminayo Madaxweyne kuxigeenka Mike Pence iyo Pompeo ay heshiis la galeen Turkiga si loo joojiyo weerarada todobaadlaha ah ee ka dhanka ah xoogaga Kurdiyiinta ee waqooyiga Syria.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre oo Washington uga qeyb galay shirka IMF iyo Bangiga Adduunka +Sawirro
Next articleErdogan vows Kurdish forces after the end of the ceasefire in Syria